မရမ်းချောင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် သုံးလအတွင်း တရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်း သိန်းပေါင်း ၂၀၉၄၉ ကျော်ဖိုး ဖမ်းဆီးရမိ
ကျိုက်ထိုမြို့နယ်၊ မရမ်းချောင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် မတ်လ ၁ ရက်မှ မေ ၃၁ ရက်ထိ တရားမဝင် စားသောက်ကုန်များ ဖမ်းဆီးမိရာ ကာလတန်ဖိုး သိန်းပေါင်း ၂၀,၉၄၉ ကျော် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း မရမ်းချောင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှ သိရသည်။
မတ်လ ၁ ရက်မှ မတ်လ ၃၁ ရက်ထိ ဖမ်းဆီးရမိသော ကုန်ပစ္စည်းများ ခန့်မှန်းကာလတန်ဖိုး ၈၂၂,၉၇၅,၂၂၇ ဒသမ ၇၂ ကျပ်၊ ဧပြီ ၁ ရက်မှ ဧပြီ ၃၀ ရက်ထိ ၄၈၁,၃၂၄,၇၇၆ ကျပ်၊ မေလ ၁ ရက်မှ မေလ ၃၁ ရက်ထိ ၇၉၀,၆၁၂,၂၂၂ ကျပ် ဖြစ်ပြီး အမှုပေါင်း ၃၉၈ မှု ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း မရမ်းချောင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
“ဖမ်းမိတာ ဘီယာ၊ အချိုရည်၊ စားသောက်ကုန်၊ တရားမဝင်သစ်၊ လိုင်စင်မဲ့ကားတွေဖြစ်တယ်၊ ဒီစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာ အဖွဲ့စုံ ၁၀ဖွဲ့ရှိတယ်၊ ရဲ၊ က. ည. န၊ လ.ဝ.က အပါပေါ့၊ ဖမ်းတာကတော့ ဒီတစ်နေရာထဲပါ သတင်းပေးရင်တော့ ဖမ်းတယ်၊ ဘယ်သူမဆို သတင်းပေးဖို့ ကြေညာထားပါတယ်”ဟု မရမ်းချောင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
မရမ်းချောင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုမဖြတ်ဘဲ ကြားပေါက်လမ်းမှ သွားလာနေသည့် ကုန်တင်ယဉ်များကို မွန်ပြည်နယ် အကောက်ခွန်ဌာန၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ လဝက၊ အစရှိသည့်အဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဖမ်းဆီးနေကြောင်း မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ကျိုက်ထိုမြို့နယ်ရှိ မရမ်းချောင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့စုံ ပူးပေါင်းပြီး တရားမဝင်ကုန်စည်ယာဉ်များအား ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လ ၁ ရက်က စတင်ကာ စစ်ဆေးဖမ်းဆီးမှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Written by – ရွှေစင်
ယခင်ဆောင်းပါး“ဒီမိုးသာနှစ်ရက်လောက် ဆက်ရွာလို့ရှိ လျှင်တော့ သဘာဝထက်လွန်ကဲပြီးတော့ မိုး ရေကြီးလို့ ရှိလျှင်တော့ ဘာလုပ်ရမှန်းတောင် မသိဘူး..”။
နောက်ထပ်ဆောင်းပါးမွန်ပြည်နယ်အစိုးရ၏ ပထမတစ်နှစ်တာကာလအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါး ငွေကျပ် သိန်း ၅၂၈၇ ကျော်ဖိုး ဖမ်းမိ